Soo dejisan SRWare Iron 79.0.4100 Standard... – Vessoft
WindowsInternetkaDareemaha WebkaSRWare Iron
Bogga rasmiga ah: SRWare Iron
SRWare Iron – waa adeegso sahlan oo si dhakhso ah loogu isticmaalo shabakada internetka ee nabdoon ee shabakadda caalamiga ah. Nidaamkani waa bedelaad kale oo Google Chrome ah, laakiin aan lahayn koodh gaar ah oo shaqeynaya taas oo ku xad gudubta asturnaanta isticmaalaha. SRWare Dhuxusha waxay ka taxadartaa sirta isticmaalaha internetka, markaa ma soo saari karto aqoonsi khaas ah oo gaar ah, ma soo dirin macluumaadka saxda ah, galo boggaga internetka iyo raadinta raadinta ee server-yada Google, xayawaanka URL-tracker, ma xasuusto rakibidda waqtiga browser, iwm. SRWare Iron waxay bixisaa dhamaan sifooyinka aad u baahan tahay si aad si habboon u muujiso nuucyada webka oo ay ku jiraan kuwa ku dhejiya xayeysiinta, maamulaha shaqada, maamulaha sirta iyo taageerada plugin. Barta ayaa sidoo kale ku jira goobo ammaan ah oo horumarineed si kor loogu qaado badbaadinta ka dhanka ah phishing iyo cambaareynta.
Ilaalinta asturnaanta hawlaha internetka
Ha bixinin ID aqoonsi
Isku-duwidda jadwalka iyo taageerada taageerada
Soo dejisan SRWare Iron
Faallo ku saabsan SRWare Iron
SRWare Iron Xirfadaha la xiriira